Iindaba -Uhlalutyo lobume bophuhliso kunye nethemba lokuthengisa kwimveliso yezokhuseleko kwimveliso ye2021
Abantu kufuneka bavezwe kwimisebenzi enobungozi efana nokubola kwemichiza, imitha yombane, izixhobo zoomatshini, kunye nezixhobo zombane ngexesha lokuvelisa okanye lokusebenza.
Ngophuhliso oluqhubekayo lwamashishini, imeko yezabasebenzi iya isiba nzima ngakumbi, kwaye umngcipheko wokwenzakala ezandleni ngexesha lenkqubo yezabasebenzi uyaqhubeka ukwanda kwaye ubonakalisa imeko yophuhliso eyahlukeneyo. Ukuthintela okanye ukunciphisa ukonzakala okuninzi okubangelwe ziingozi zorhwebo okanye iingozi emsebenzini.
Ngokwamalungu ohlukeneyo okhuselo, izixhobo zokhuselo zobuqu ikakhulu zibandakanya ukukhuselwa kwesandla, ukhuselo lomzimba, ukhuseleko lokuphefumla, ukhuseleko lwentloko, ukhuseleko lweenyawo kunye nezinye iimveliso, ezinje ngeiglavu, iimpahla zokuzikhusela, iimaski zokuphefumla, iminqwazi, izinto zokufaka iindlebe, amagogo, izihlangu zokuzikhusela kunye nezinye iimveliso. .
Ngokwezibalo, i-akhawunti yokulimala kwesandla ngenxalenye ephezulu yeengozi ezinxulumene nomsebenzi, ukubalwa malunga ne-1/4 yenani lilonke leengozi ezinxulumene nomsebenzi. Ngokuqhelekileyo zibandakanya ukulimala ngomatshini, ukulimala komzimba, ukulimala kweekhemikhali kunye nokulimala kwintsholongwane. , Ukusika, ukukhama, ukwenza i-acupuncture kunye nokunye ukwenzakala koomatshini zezona ziqhelekileyo. Ngokophononongo olwenziwe yiFree Joint Research Organisation yaseMelika kunye neHarvard Institute of Health Public, ukunxiba iigloves ezifanelekileyo zokhuseleko kunokunciphisa ukwenzakala ngengozi kwezandla ngama-60%. Kwangelo xesha, iigloves ezifanelekileyo zokukhusela azinakukhusela kuphela ukhuseleko lwezandla, kodwa zinokuphucula ukusebenza kwezandla kwindawo ekhethekileyo yokusebenza. Umzekelo, iiglavu ze-nitrile ezilahlayo zingenza abantu bakhuseleke kwaye bakulungele ukubamba ngexesha lenkqubo yokuvelisa. Iikhemikhali, amabala eoyile, njl.
Iiglavu zokhuselo lokhuseleko zinesabelo siphezulu kwimakethi kwicandelo leemveliso zokhuselo lwabasebenzi ngenxa yesicelo sabo esityebileyo, iimeko ezahlukeneyo kunye nezihlwele ezikhulu zesicelo. Ngokuka "Imveliso yokuThintela ukuSebenza kwaBasebenzi kwiDatha eNkulu", isabelo sentengiso seemveliso zam zelizwe lam zokhuselo lwezandla kwishishini lokhuseleko lwabasebenzi lingaphezulu kwe-30%.